Ezigbo ụlọ maka ire ere. Ndi 1 nke 2 Chapel Floating Chapel na XNUMX. Ugbu a, ụlọ na-ekpo ọkụ
Home » Ndepụta » Ebube - Ụlọ ụlọ maka ire ere
Ezigbo ụlọ maka ire ere. Ọ bụbu otu n'ime ụlọ ụka abụọ na-ese n'elu ala. Ugbu a, ụlọ na-ese n'elu mmiri!
Na-atụgharị — Ee, ụlọ a na-adọrọ mmasị. Ndị mmadụ kwụsịrị ma kwuo. Ha na-ese foto ma na-efegharị. Ha chọrọ ịhụ n'ime. Site na oche gị, ị na-amụmụ ọnụ ọchị ma na-azụghachi azụ. A na-emenye ha aka. Ha na-achọ ka ha bụ gị ... ma ọ bụ, nwere ike ọ dịkarịa ala soro gị. "
N'ịbụ onye a maara dịka "Chapel na Bay" ọ bụ n'ezie ụlọ agbamakwụkwọ, otu n'ime nanị ụlọ ụka abụọ na-ese n'elu ala. N'ime ndụ ahụ, a na-egosipụta ya na "Njem Njegharị" ma dee banyere "London Daily Mail". Mgbe o mechara chegharịa, ọ bụzi ụlọ na-adọrọ adọrọ na ire ụlọ maka ire ere. Kedu ihe ọ ga - abụ na ndụ ya mgbe ọ bụ gị - ikekwe ụlọ na Seattle ma ọ bụ na Chesapeake, ma ọ bụ na-eje ozi dị ka Airbnb na marina. Ma ọ bụ, ị ga-ese n'elu Intracoastal Waterway ka gị na ndị enyi gị na-atụrụ ndụ? Ikekwe, ọ ga-abụ ọrụ gị ebe ndị ahịa na-amata ngwa gị na ihe na-ekewapụ gị na ndị asọmpi. Eleghi anya ị bụ onye isi nri / oriri na ọṅụṅụ na ị ga-azụ ndị ahịa n'ọdụ ụgbọ mmiri maka nri abalị. Nhọrọ dị ukwuu!
Pịa n'elu iji lee vidiyo nke a
Ee, ọ na-eme mkpọtụ. Na ndụ ya ọzọ bụ nanị site n'echiche gị. Kedu ihe ọ ga - abụ?
Ihe kariri $ 1,300,000 abanyela n'ime ya na mbughari na nso nso a gaa n'ulo ndi na-ese n'elu mmiri. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ nsọ ahụ ka na-anọgide, gụnyere oghere 30-foot, 7 na-ekpuchi windo ndị nwere ntụpọ nke ọ bụla kpuchiri na windo na-egbuke egbuke, ọnụ ụzọ ụlọ ụka siri ike, ụlọ elu ígwè, na ebe a na-emeghe ma na-emeghe maka ịme ntụrụndụ na ịnụ ụtọ echiche . Ugwu zuru oke nke barge catamaran bụ ogwe ụkwụ 1800 dịka oche na ụlọ 1050 sq. Ft.
N'ime ya bụ ihe oriri niile na ụlọ oriri. A gbanwee kpamkpam, ihe eji emepụta ihe na-agụnye ọnụ ụlọ dị ndụ nke na-emepe n'elu otu n'ime ihe mkpuchi ahụ, otu kichin na-emepụta ihe na ngwa ngwa, ihe ndị dị na granite na otu ụlọ osisi mara mma nke a chọtara n'ime ime ụlọ na ntinye. Nakwa na isi isi bụ ụlọ ndị nwe ụlọ na -acha saa bat na nke abụọ nke ịsa ahụ. Nzọụkwụ dị elu na-eduga na ime ụlọ nke abụọ.
Dabere na marina mara mma na Osimiri Manatee na Palmetto, Florida, ọ na-ekpuchi oke ikuku na ndị buru ibu na-enye afọ ojuju maka ụbọchị ndị ọzọ. Na njem ma na-aṅụ ụtọ abalị na mmiri - ihe ntanetị asatọ na kilowatt na-eme ka ihe niile rụọ ọrụ. Egwuregwu TV Satellite Motion gụnyere!
Kwadoro ya site na ngwa ahịa abụọ nke Cummins Diesel, ọ bụ onye nwere onwe ya ma nwee ike imegharị ya n'okpuru ike nke ya na ihe dịka 6. Ndị na-eme njem ụgbọ mmiri na-emepụta ụgbọ mmiri Daniel J. Avoures na Associates haziri ma wuo ụgbọ mmiri mbụ ahụ. Enweghị ihe ọ bụla a na-eleghara anya na ịmepụta ụgbọ nwere ike ijide mmadụ 110 ka ọ na-enye ebe dị nchebe ma dị jụụ kachasị mma. Ụlọ ahụ nwere ike ịga ebe ị na-aga ma ọ bụ ebe ntanetị - ọ dịghị mkpa maka nsị!
Na-atụ aro 33 tọn, ma tụọ 30 'X 60', ihe nnweta nke obere ihe-arụzi ihe nile nke fiberglass bụ nnukwu ihe. N'elu mmiri n'elu ejima catamaran ejima, ọ naghị enwe nguzogide mgbe ọ na-agafe na mmiri ma nwee ike ịnọgide na-adị jụụ ka ọ na-asọba site na ebili mmiri. Kama arịlịka, elekere elekere elekere eletrik na-adabere iji kwado ụgbọ ahụ na ifufe. Njirimara a na-enye ohere ịkwaghachi na mmiri na-emighị emetọ dị ka ọ dị mkpa ka ikpochapu ọ bụla dị mkpa.
A na-enye ya ihe niile egosiri na foto ndị ahụ gụnyere TVNNUMX "TV ihuenyo, arịa akpụkpọ anụ, ebe a na-anọ n'èzí na gas grill, gbakwunyere kichin nke ọma.
Ị nwere Pụrụ Iche Iche Na-ere?
Ahịa: $ 399,000
Okwu: Osimiri Manatee
Koodu mpaghara: 34221
Afọ Wuru: 2004
Ime ụlọ: 2
Ụdị Ngwongwo: Ụlọ obibi
ọnọdụ: magburu onwe
Ntọala: Osisi / Tile
Heat / Cool: Kpido na Generator
Nke gara agaYurt Ndụ nso Branson, MOIhe na-esoteEcho - Ugwu Green Modern